महासचिवको आठ आना- विचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १४, २०७६ विमल निभा
र यसलाई अझ छ्याङ्ग पारेर भन्ने हो भने फगत आठ आना जमिन भन्नुपर्ने हुन्छ । उनको गृहनगर रूपन्देहीको जमिन भएको भए सवा/पौने कठ्ठाजति भनिन्थ्यो क्यारे ! (मलाई यस्तो मापोको ज्ञान नभएकोले ठ्याक्कै भन्न असमर्थ) ।
तर यो राजधानी काठमाडौंको घर–घडेरी जमिन भएकोले आनामा भनिएको हो । वस्तुतः कुरो के हो भने उनले बालुवाटारमा आधा रोपनी अर्थात् आठ आनाको सहजै प्राप्ति गरेको खबर खुलस्त भएको छ । र बालुवाटार भनेको कुनै सामान्य जमिन नभएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सरकारी बासस्थान हो ।
कमरेड महासचिव विष्णु पौडेलको आठ आनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अनायास तीव्र विद्युत तरंग पैदा गरेको छ । यस सम्बन्धमा एकाध कमरेड अचम्मैसँग मुखर भएर विरोध गरिरहेका छन् भने बहुधा कमरेडहरू मौनतामा रहेका छन् । के यी अबोला कमरेडहरू आफ्ना महासचिवको दह्रो समर्थनमा उभिएका हुन् त ? त्यसो भए, यसलाई आठ आनाको कमरेडीय सहमति भन्नुपर्ने हुन्छ । जे होस्, कतिपय कमरेड भने अलिकति भिन्न पाराले अभिव्यक्त भइरहेका छन् । र यस्ताको स्वरको सार के रहेको छ भने असलमा हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेल आठ आनामा सोह्रै आना ठगिएका छन् । त्यसकारण उनलाई आफ्नै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले यही हिसाब–किताबमा क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको आठ आना जमिनको विवाद कुनै नौलो विषय होइन । पहिले पनि यस्तो आठ आने विवाद मजैसित भएको छ । र त्यो आठ आनाको सर्वथा विवादित अतीतमा एक नभएर दुई–दुई कम्युनिस्ट महासचिवहरूका प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । यद्यपि ती भूतपूर्व महासचिवहरू थिए । याद गर्नोस्, पुराना महासचिवद्वय कमरेड माधवकुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनालको त्यो आठ आना जमिनको बहुचर्चित द्वन्द्व । दुवै द्वन्द्ववादका कट्टर अनुयायी भएकाले कोटेश्वरस्थित आठ आना जमिनमा द्वन्द्वरत थिए ।
एकातिरबाट कमरेड माधव भनिरहेका थिए– ‘यो आठ आना श्रीमती गायत्री नेपालको नाममा भएकोले मेरो हो ।’ र अर्कोतिरबाट कमरेड झलनाथको प्रत्युत्तर थियो– ‘जोसुकैको नाममा भए पनि यो आठ आना मेरै हो ।’ त्यसउसले सहीमा आठ आना कसको हो भन्नेमा द्वन्द्व चर्किएको थियो । तथापि एउटा कुरोमा चाहिँं कुनै द्वन्द्व थिएन । र त्यो के भने दुवै कमरेडहरूमध्ये कसै न कसैको आठ आना जरुर थियो । अब कसको आठ आना थियो, त्यसबखत मैले भेउ पाउनसकेको थिइन । र हालसम्म पनि त्यस स्थितिमा कुनै खास परिवर्तन आउनसकेको छैन । कुन्नि कसको थियो आठ आना ! (पढ्नोस्, ‘कान्तिपुर’ को २६ चैत २०६७ सालको ‘सिउँडी’ मा प्रकाशित– आठ आनाको सिद्धान्त) ।
भूतपूर्व महासचिवहरू कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधवकुमार नेपालको आठ आनासँग वर्तमान महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको आठ आनाको कुनै सम्बन्ध छैन । यो विलकुलै मौलिक आठ आना हो । यसको कारण के हो भने त्यो भूमिगत कालको परिघटना थियो ।
र अहिले कमरेडहरू भूमिबाट फुत्त बाहिर आइसकेका छन् । अर्थात् सबै जमिनमाथि नै छन् । कसैको जमिन मुनिको बास छैन । चाहे त्यो पुरानो महासचिव कमरेड झलनाथ खनाल होस् अथवा नयाँ महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल नै । हो, एकजना वरिष्ठ कमरेड मोहनविक्रम सिंह अवश्य जमिनमुनि नै छुटेका छन् । तर यसो भन्नु पनि त्यति सत्य होइन । वास्तवमा उनी अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेका छन् । यही लामो समयदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को आफ्नो महासचिव सम्बन्धी कडा भूनीति रहेको छ ।
के यो अर्धभूमिगतपन भनेको आधा जमिनमुनि र आधा जमिन बाहिरको कुनै स्थिति हो ? अब जेसुकै भए पनि हाम्रा आदरणीय नेता कमरेडहरूका अग्घोर जमिनमोह चाहिँं पटक्कै छुटेको छैन । यसको सबभन्दा ताजा उदाहरण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको आठ आना जमिन हो ।
यस सन्दर्भमा उनी एक सूचनापत्र निकालेर निर्धक्कसँग भन्छन्– ‘मैले बालुवाटारको आठ आना जमिन दलालसँग किनेको हुँ । त्यसै पाएको होइन ।’ अब किनेर पनि पाउने नै भएकोले यहाँ कुनै भाषा विवाद भएन । जहाँसम्म कमरेड महासचिवले सूचित गरे बमोजिम जमिन दलालसँग किनेको कुरो हो, यसमा पनि कुनै विवाद गर्न मिल्दैन । किनभने आठ आना जमिन सोझै जमिन दलालसँग खरिद गरिएको हो ।
तसर्थ यो विशुद्ध जमिन दलालीको मामलो हो । कुनै राजनीतिक दलाली त होइन नि ! यसका साथसाथै महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको आठ आनाले के पनि दृढतापूर्वक प्रमाणित गरेको छ भने उनी कुनै साधारण खालको कम्युनिस्ट नेता नभएर ठाडै जमिनसँग जोडिएका एक जमिनी नेता हुन् ।
बालुवाटार जमिन प्रकरणमा कवि एवं गीतकार दिनेश अधिकारीको नाम आएको छ । यसले यसमा एउटा कलात्मक साहित्यिक ‘टच’ दिएको छ । अतः साहित्य जगतमा अपार हर्ष छाएको छ । मेरो हार्दिक बधाई छ, कवि मित्र ! प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ ०८:२१